Dogma » Qalab lama huraan ah
browser Tani kaliya ka shaqeeya aad uga wanaagsan kuwa kale: Waxaa si degdeg ah oo ka xasilloon.
Firefox (arko dheeraad ah oo ku saabsan hoos addons) – 10/10
Firefox, inkastoo aan sida populare sida Google Chrome, weli waa King of ahaanayta. Waa labaad u dhow ii.
Waxaan isticmaali KeePass in ay sii passwords aan badbaadiyey, lo, kaydiyaa meel ka baxsan gacanta ku xisbiyada 3aad.
bedelka lagama maarmaan u ah DropBox. Waa freemium – though I don’t have a pressing need to use the Pro Edition, haddii aan sameeyey waan ka waaban lahaa in ay bixiyaan, waxaa ka.
Halkee kale oo aad leedahay lahaa maktabadda kulan?
Tani waa aalad Windows ah si ay u caawiyaan hawlaha nuqul serialise / dhaqaaqo. Waxaan u dhaqaaqay in ka badan in ay marka TeraCopy lahaa arrimaha waafaqsan 64bit. It only loses points for having a cluttered UX
Dhammaadka Canary – 9/10
Tani Addoon nidaamsan oo yar kuu sheegayaa haddii Shahaadada SSL for goobta aad hadda arkaysid waxaa ugu dhaqsaha badan socday uu dhacayo. Haddii goobta adiga kuu gaar ah uu leeyahay Shahaadada SSL, Waxaan ku talinaynaa in aad isticmaasho iyo Addoon this si ay uga caawiyaan looga fogaado Shahaadada SSL your site ee dhacayo ay sabab u tahay la'aanta fudud ee wargelinta ama afgaranwaa.
Waayo, horumarinta web iyo tijaabo la pages. Awesome for jirrabaya gelinno yar ee code sidoo kale debugging pages.
Awesome waayo Author pages gaar ah iyada oo loo marayo server wakiil gaar ah. This is useful for when some sites are blocked or there is breakage for in a Transparent Proxy server. 🙂
Waxaan u isticmaalnaa si wadada qaar ka mid ah gaadiidka ka badan server wakiil aan lahaa aan halkii marayo wadooyinka default tago. Waxaa sidoo kale waa mid aad u dabacsan. Haddii aad leedahay in ka badan hal server wakiil la heli karo iyo mid ka mid ah oo aad caadi ahaan si lama filaan ah u isticmaali tagaa on bilig bilig ah, kaliya beddelaan in ka badan in mid ka mid ah ee soo socda. 🙂
Greasemonkey ku darayaa dabacsanaan. There are many available scripts online to customise pages.
NoScript waa laga cabsado ee xayaysiisyada ka xanibeen. Its yar diiqayo ah ee ugu horeysay tan aad leedahay si aad Liiska Mudnaanta oo dhan goobaha aad rabto – laakiin mustaqbalka fog waa mid aad u qalantaa. 🙂
Bixin Pages – 10/10
Aad faa'iido badan ee haddii aad caleenta goobta iyo waxa ku dhacaya hoos ahaan. Haddii goobta waa ma guurto ah-content-oriented markaas taas oo ka dhigaysa waa u fududahay in ay si deg deg ah ka heli content haddii ay online kaydin.
Screengrab waa Addoon fudud shaashadda oo tii shaashadda ka mid ah bogga oo dhan web aad arkaysid, xitaa haddii ay tahay ka badan size screen aad. inta badan waxaan u isticmaali si aadan in aan noola shaashadda ka dib on.
Waxaa jira cadaabta in ay dhex mari aan plugin haddii aad rabto in aad si loo aqoonsado server a. Waxaan u leedahay in loo isticmaalaa in lagu sameeyo this waqtiga oo dhan.
maamulka tab Awesome waayo, haddii aad leedahay in ka badan 7-ama-si tabs.
Video DownloadHelper eegayaa Streaming warbaahinta – si gaar ah u raadinaya wax content badan in la soo bixi. Marka aad guji icon, waxaa idin tusiyo durdurrada hadda-degsado iyo ku siinayaa ikhtiyaarka in ay saf sida a “caadiga ah” download.
Tan iyo aad marna ma ogaan haddii FF waxaa laga sugayaa inay shil ama awood u socda si ay u dhinto, Waxaan doorbidayaa inuu badbaadiyo nuqul aan desktop ka dibna waxaan arki kartaa video oo aan la isticmaalayo bandwidth dheeraad ah in ay mar kale soo bixi video ah. Sidoo kale, shaqada, marka dadku soo diro ayaa i xidha in youtube ama warbaahinta kale, Waxaan inta badan ma dhibaato daawashada ilaa badan ka dib – at my firaaqada gaar ah ama inta lagu jiro nasasho.